TTSweet: ကင်မ်ချိ- ကိုးရီးယားမုန်ညင်းချဉ်
ဒီနေ့တော့ ကိုးရီးယားစာ ကင်မ်ချိ (Kimchi) လုပ်နည်းရယ် ... Kimchi Soup ချက်နည်းရယ် ပြောပြပါမယ် ... ကိုးရီးယားမုံညင်းချဉ်ပါ ။
၁။Korean Cabbage/ Chinese Cabbage လို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာလို အိုးရှင်းထုပ် တစ်ဝက်လောက်
မုံလာထုတ်ကို ၂ရက်လောက်ရေခဲသေတ္တာထဲမထည့်ပဲ အရွက်များကိုဖြန့်ပြီးခြောက်အောင် အပြင်မှာထားပါ။ ဆားစိမ်ခါနီးမှ တစ်လက်မလောက်စီဒါးနဲ့ဖြတ် ထားပါ။ ဇလုံကြီးကြီးတစ်လုံးထဲကို ဆား၂ဇွန်းလောက်ရယ် ရေ မုံလာရွက်မြုတ်ရုံထည့်မွှေပါ။ ဆားပျော်ရင် မုံလာရွက်လှီးထားတာတွေ တစ်နာရီခန့် စိမ်ထားပါ။ ပြီးရင် ရေနှစ်ထပ်လောက်ဆေးပြီး စကာနဲ့ ရေခြောက်အောင် တစ်နာရီလောက်စစ်ထားပါ။(မုံလာရွက်က ဆားရည်စုတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် ... ရေဆေးလို့ ဆားရည်တွေထွက်သွားမှာ မစိုးရိမ်ရပါ)
ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူကိုရော ညက်နေအောင်ထောင်းပြီး အထက်ပါအားလုံးကို သမအောင် ဇွန်းနှင့်မွှေပါ။
လက်နဲ့မွှေမယ်ဆိုရင်တော့ လက်အိပ်စွတ်လုပ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ် ... လက်နဲ့ထိရင်သိုးတတ်ပြီး ကြာရှည်မခံပါ။
ကင်ချီးအနှစ်ရယ် ၊မုံလာရွက်ရေစစ်ထားတာရယ်၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ မုံလာဥလှီးထားတာတို့ကို ဇလုံတစ်ခုထဲထည့် သမအောင်ဇွန်းနဲ့နာနာမွှေပေးပြီး ပလပ်စတစ်ပုံးထဲထည့် အဖုံးအုပ်ပြီး အပြင်မှာထားပါ။ နောက်တစ်ရက်၂ရက်ဆို ချဉ်ပါပြီ။ ချဉ်သွားပြီဆို ရေခဲသေတ္တာထဲပြောင်းထည့်ပါ။
ရေရှည်ခံလိုရင် လက်နှင့်မခပ်ပါနှင့်။ ဇွန်းနှင့်သာကော်ပါ။
Posted by T T Sweet at 2:12 AM
Labels: (၈ ၀၀) ကိုးရီးယားစာ- ဂျပန်စာ, (၈- ၁) ကင်မ်ချိ
MMR Marine September 25, 2009 at 12:52 AM
မိပြီလူညာ... ခင်ဗျားပြောတာတွေ တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူး...ကျုပ်ကိုညာလို့မရဘူး..ခင်ဗျားကိုဘယ်ကိုလီးယားများ ဒီလိုသင်လဲ...အခေါ်အဝေါ်လဲမှားနေတယ်ဗျ...ကင်ချီးမဟုတ်ပါဘူး..ကင်းမ်ချီပါ..ခင်ဗျားလုပ်မှပဲ ချီးကင်စားရမလိုဖြစ်နေပြီ...KIMCHI...OKey, lernt more if you want to teach people,..u must be very sure first,..LOL
MMR Marine September 25, 2009 at 1:06 AM
for making KIMCHI, There is No ONION, NO FISH SAUCE, NO SUGAR, NO RICE POWDER,..I'll show you
1. The Chinese garbage is required to soak in the salted water for at least FIVE-SIX HOURS together with Radish,..
2. Throw away those salted water and keep the vegi till there is no water hidden in between the leafs.
3. Cut into size as you wish,
4. During the time you soak the vegi, the ingredient should prepare as follow:
a) Spring Onion,
c) Red Chilli ( Just for Color and to get Spice)
e) Black papper
f) Ajinomoto ( If you wsih-optional)
i) Sesame Oil & Sesame Seed
j) All Blend together without sesame oil,..
everything is being prepared, now you can mixed with those you had cut just now,..
You can keep inside the freeze after it has been mixed,
You can taste it even after ONE DAY LATER,..
I dare to BET you,.. even can touch by hand, keep how long you want,..YOU DARE TO BET ME?
if you want REALLY KIMCHI pls contact me,..im the wholesale supplier for Malaysian Korea,..hahahahahah
T T Sweet November 4, 2011 at 1:19 PM
Please don't make people to misunderstand my post. I have tried several times kimchi by this method and it is very good. You can see in google how to make kimchi, most of people use fish sauce and anion. I don't understand why you say such rude comment and wrong information. Please see below youtube how to make kimchi.
Htet Aung December 15, 2011 at 4:19 PM
Yes, the cooking ways are different from each.. Please do not give such rude comments cos this blogger is not earning money from this recipe. She is just sharing her recipes that she thinks fine. If you don't like it, don't come here... And also the one called 'MMR Marine' I don't know how you are doing your business there. I have so many Korean friends. They also add fish sauce, sugar and onion.. Please act likeaadult and think twice before you talk....
I have been watching this MMR Whatever's comments. Why would he come and read this blog if he thinks there is no benefit to him? Wow..aproof of such no life, low life & jealous people exist. Here is something for you to practice from tomorrow but not to come back and use it here. If you have nothing nice to say "say nothing". Grow up & make sure your brains grow up from the size ofapea.